MacBook potika, namela anay i Prince, nanao lavanty fiaraha-misakafo hariva niaraka tamin'i Tim Cook, fahafatesan'ny mpiasa Apple ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac | Avy amin'ny mac aho
MacBook potika, namela anay i Prince, nanao lavanty fiaraha-misakafo hariva niaraka tamin'i Tim Cook, fahafatesan'ny mpiasa Apple ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Pedro Rodas | | Apple, Mac OS X, Solosaina Mac
Salama namana, isaky ny alahady dia tonga miaraka amin'ny fanangonana vaovao mifandraika amin'ny tontolon'ny paoma manaikitra isika ary mazava ho azy, miaraka amin'ny Mac malalantsika. Fa alohan'ny hanombohantsika dia te hiarahaba ireo reny rehetra amin'izao tontolo izao isika amin'ny andro toy ny androany deraina noho ny maha izy azy ry neny! Felicidades ¡!
Raha manao izany isika dia manomboka amin'ny fanangonana vaovao vaovao isan-kerinandro an'ny Soy de Mac, ka tohizo hatrany ny famakiana satria miresaka zavatra maro isika anio mety tsy afaka nihaona nandritra ny herinandro ianao.
Atombotsika ny fanangonana amin'ny alàlan'ny fampahatsiahivana ilay lahatsoratra misy olona tsy mitandrina Nanapaka MacBook tamin'ny radial aho.... asa inona ... Raha maro amintsika no maniry ny hividy iray amin'ireo MacBook vaovao, ny mpampiasa hafa dia natokana amin'ny fanandramana amin'ny fanapahana radial amin'izy ireo. Ny tena marina dia misy horonan-tsary amin'ity karazana ity manimba fitaovana efa ela tao amin'ny tambajotra ary tsy zava-baovao ho an'ny rehetra izany, saingy mety hahagaga ny maro ny fomba ahafahana mandany vola be toy izany amin'ny iray amin'ireny. MacBooks sarobidy hanome azy tsy misy ilàna azy raha tsy esorinao fotsiny ao anaty boaty.
Amin'ity taona ity izy ireo dia tsy mahafoy ireo mozika manan-danja. Tamin'ny fiandohan'ny taona dia i David Bowie ary andro vitsy lasa izay izay niditra tao amin'ilay lisitra dia Prince tamin'ny faha-57 taonany. Tsy toa an'i David Bowie izay matin'ny homamiadana, ny antony nahafaty an'i Prince toa mifandraika amin'ny zava-mahadomelina hatramin'ny enina andro talohan'ny nahafatesany dia notsaboina tamin'ny fatra tafahoatra izy. Apple dia nanokana faritra ao amin'ny fivarotana mozika ao aminy izay nanangonana ny sanganasan'ny artista rehetra.
Toy ny tamin'ny taona lasa, ny CEO CEO Apple Cook dia resy lahatra handray anjara tsy misy fitiavan-tena amin'ny fiantrana ary manolotra lavanty fiaraha-misakafo hariva miaraka amin'ny mpandoa vola avo indrindra ho an'ny rehetra. Fa ilay mpandresy amin'ny lavanty dia tsy hanana fotoana hisakafoanana miaraka amin'i Tim Cook ihany, fa koa hahazo tapakila ianao ho an'ny keynote manaraka izay Apple Mikasa ny hankalaza izany: ny volana Jona mifandraika amin'ny WWDC 2016 na ny fampisehoana ny iPhone 7 vaovao amin'ny volana septambra amin'ity taona ity.
Ny iray amin'ireo zavatra nianarana tamin'ity herinandro ity dia ny Apple Watch manaraka Mety hanana fifandraisana izany raha tsy mila ny iPhone ary izany dia satria nangataka tamin'ny mpamorona i Apple fa tokony ho zanatany amin'ny 1 Jona ny rindranasa rehetra ho an'ny Apple Watch.
'The Wall Street Journal' naka teny tao amin'ny lahatsorany izay napetrakay tamin'ny faran'ny lahatsoratra, fa Apple dia miasa amin'ny fampidirana ny fifandraisana amin'ny tambajotra finday, ary a mpandrindra haingana kokoa amin'ny taranaka manaraka an'ny Apple Watch.
Nanambara i Apple tamin'ity herinandro ity valiny ara-bola ho an'ny telovolana faharoa (telovolana voalohany amin'ny kalandrie voalohany) tamin'ny taona 2016. Ireo valiny ireo dia nahitana tahiry fidiram-bola ho an'ny sandan'ny 50,6 miliara dolara miaraka amin'ny tombony isam-telovolana 10.5 miliara, na izay mitovy, amin'ny 1.90 dolara isaky ny zara. Raha apetratsika amin'ny fomba fijery dia nihena ny fihenan'ny Apple, satria tamin'io telovolana 2015 io ihany dia nahazoana vola 58 miliara dolara miaraka amin'ny tombom-barotra 13.6 miliara, na 2,33 dolara isaky ny zara.
Ary tonga tamin'ny vaovao mahatsiravina tao amin'ny Apple Campus izahay ary tamin'ity herinandro ity olona iray no maty tao amin'ny Apple Campus any Cupertino. Hatreto dia mbola tsy betsaka ny antsipirian'ny hetsika ary lojika izany Ho fanajana ny havana na namana akaiky an'ilay maty. Ny tena mazava dia ny toerana nahitana ity olona ity maty, ary tao amin'ny efitrano fihaonambe izay ananan'i Apple tao anatin'ny tranobe tao Cupertino.
Farany dia lazainay aminao fa efa namoaka ny OS X El Capitan 3 beta 10.11.5 ho an'ny mpamorona. Amin'ity tranga ity, toy ny tamin'ny andiany teo aloha, Apple dia mamela eo am-pelatanan'ny mpamorona kinova nohatsaraina amin'ny lafiny fampiasa sy amin'ny fanitsiana lesoka raha ampitahaina amin'ny kinova taloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » MacBook potika, namela anay i Prince, nanao lavanty fiaraha-misakafo hariva niaraka tamin'i Tim Cook, fahafatesan'ny mpiasa Apple ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Ahoana ny fomba hanovana anarana ny rakitra marobe indray mandeha miaraka amin'ny OS X El Capitan
Ahoana ny fomba hahitanao ny asanao amin'ny Dashboard momba ny fahasalamana an'ny iPhone